Ivory Coast oo ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee Qaramada Afrika | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Ivory Coast oo ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee Qaramada Afrika
Ivory Coast oo ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee Qaramada Afrika
Xulka qaranka Ivory Coast ayaa ku guulaystay koobka qaramada Afrika ee 2015. kulan waqti badan qaatay isla markaana ay labada xul ay ciyaareen waqtiga dheeriga ah, sidoo kalena redhoodhayaal badan laysku laagtay ayay ugu danbayn Ivory Coast noqotay xulka qaranka ku guulaystay koobka qaramada Afrika ee 2015. Waxaa halyayga Ivory Coast noqday goolhayaheeda Barry kaas oo badbaadiyay rekoodhaha uu goolahayaha Ghana ku tuurtay halka uu kiisii dhaliyay.
Xualka qaramada Ivory Coast iyo Ghana oo isugu yimid finalka koobka qaramada Afrika ayaa dib u celiyay xusuusta iyo finalkii 1992 , markaas oo ay sidan oo kale iskugu yimaadeen finalka koobka qaramada Afrika. Ghana oo sanadkii 1992 laga qaaday koobka ayaa doonaysay inay markeeda ka aarsato Ivory Coast, halka ay Ivory Coast niyada ku dhisanaysay guushii iyo koobkii ay hore uga qaaday Ghana.Indhaha caalamka oo dhan ayaa ku soo jeeday xulka qaadi doona koobka bisha loo tartamayay.
Kulankan finalka koobka qaramada Afrika ayaa si fiican garoonka loo soo buux dhaafiyay, waxayna labda xul qaranka isku soo diyaariyeen sidii ay u hanan lahaayeen koobka qaramada Afrika ee 2015.Ghana ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab ciyaareed fiican, waxayna abuurtay fursado fiican. Daqiiqadii 26 aad ayuu Christian Atsu laba difaac oo Ivory Coast ah isku dhex yaaciyay, kadibna inta uu banaan samaystay uu kubbad gantaal ah ku ganay goolka Ivory Coast laakiin Atsu ayaa arkay dadaalkiisa oo birta kaga gariiriyay.
Ghana ayaa inta badan qaybta hore ee ciyaarta kubbada haysatay, waxayna markasta halis ku ahayd goolka Ivory Coast. Ivory Coast ayaa u muuqatay in khadka dhexe lagaga xoogan yahay, laakiin qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada xul qaran ku jireen taxadar xad dhaaf ah , waxayna ka cabsi qabeen in ay qaladaad sameeyaan oo ay dhib ku noqoto.Atsu ayaa dhibta ugu wayn ku ahaa Ghana. daqiiqadii 89 aad ayay Ivory Coast ku sigtay inay la timaado goolka guusha kadib markii uu Doumbia ku sigtay inuu inadha xado laakiin fursadaa ayaan noqonin tii lagu kala bixi lahaa, waxaana ugu danbayn ciyaarta lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Markii dib loo bilaabay waqtiga dheeriga ah ayay labada kooxood u muuqdeen inay daal badan dareemayaan, laakiin haddana waxay samaynayeen fursado aan halis ahayn.30 kii daqiiqo ee dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray ayayna labadan xul qaran ku kala badin taas oo keentay in lagu kala saaro rekoodhayaal ama gool ku laagyo.
Waxaana ugu hor qaataday rekoodha Ghana waxaana udhaliyay Wakaso, Ivory Coast ayuu rekoodha ugu horeeyay ka qasaariyay Wilfried Bony. Jordan Ayew ayaa kan labaad udhaliyay Ghana halka uu rekoodhaha labaad Ivory Coast ka qasaariyay Gadji Tallo.
Waxaa rajada ivory Coast soo celiyay Barry oo ka badbaadiyay Afriyie Acquah, halka uu Ivory Coast si fiican ugu dhaliyay.arinta ayaa waji kale yeelatay waxaana Ghana markale ka qasaariyay Acheampong,. waxayna markale noqdeen barbaro waxana I.coast udhaliyay Seydou Doumbia Adre Ayew ayaa rekoodhaha shanaad udhaliyay Ghana. Yaya Toure ayaa xulka qarankiisa isaguna rekoodhaha shanaad udhaliyay Ivory Coast.min shantii jeer ee ugu horaysay ee la tuurtay ayaa haddana barbaro ku dhamaaday.
Waxaana dib loo bilaabay rekoodhayaal cusub laakiin qaybta cusub ayaa noqotay mid ay si fiicaan labada xulba udhashadeen. min shan jeer oo kale ayay dhamaantood shabaqa soo taabteen.ugu danbayn waxay soo gaadhay goolhayayaasha, waxaana ku horeeyay oo tuuray goolhayaha Ghana, laakiin goolhayaha Ivory Coast ee Barry ayaa markan suunka u adkaystay kana badbaadiyay Brimah. Yaa Ilaahii!!!!, waxaa halyayga garoonka noqday goolhayaha Ivory Coast oo inta uu goolahahaya Ghana markiisa ka badbaadiyay haddana markiisa shabaqa si degan u soo taabtay, waxaana sidaa Champions-ka Afrika ku noqday Ivory Coast. waxay ahayd waxaan la rumaysan karin in Ghana ay bilawgii laba rekoodhe dheerayd balse iyadii ugu danbayn la garaacay.Hambalyo Ivory Coast.